Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem]
1 ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 22nd April 2010, 12:05 pm
ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာပါ... Harddisk 500 GB ကို partition ပိုင်းရာမှာကျွန်တော်က 5ပိုင်းပိုင်းပေးလိုက်တယ်ဗျာ ....သူက Window အစုံသုံးတတ်တော့ XP အတွက် 50 G Vista အတွက် 50G Window7အတွက် 50 GB ဂိမ်းအတွက် 150 G နဲ့ကျန်တာက Data အတွက်ပါ...ဒါနဲ့ ကျွန်တော် xp တင်ပေးလိုက်ပါရော....တင်တုန်းကကောင်းတယ်ဗျ....ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး....နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့....ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်... HDD ကအသံတွေမည်နေတယ်တဲ့....အဲ..
Hardware ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြတော့ window နဲ့HDD နဲ့ ညိနေတယ်တဲ့ဗျ.....ကျွန်တော်ပဲပိန်းလို့ လားမသိဘူး bad sector တွေဘာတွေတော့ကြားဖူးတယ်.... OS နဲ့HDD
2 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 11:58 am
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ဖြေပေးမယ့်သူလည်းရှိဘူး....အဟင့် .... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
3 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 12:34 pm
ဘာနဲ့ ညိနေလဲဆိုတာ ကျနော်တော့တိဘူး
ဒီဖိုရမ်က Hardware ဆရာတို့ ကော ဘာနဲ ညိနေတယ်ထင်လဲ မသိ ?
Hardisk မှာ Speaker မပါပဲ ဘာလို့ အသံထွက်တာလဲဟင်
4 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 12:42 pm
အဲဗျာ..... Harddisk မှာ speaker တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ.....တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်နေသလိုမျိုး ဂျစ်ဂျစ် ဂျစ်
ကျွန်တော့်အထင်တော့...... Power မလုံလောက်လို့ လားမသိဘူး..... ကျွန်တော်က Power ကို
Harddisk ကော... DVD writer ကိုပါထိုးထားမိတယ်ဗျ....တစ်ကြိုးထဲမှာ...ဒါ့ကြောင့်လားမသိဘူး...
5 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 12:52 pm
ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ ပြောကြည့်မယ်.....ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံပေါ့
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာလဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ harddisk
အသံတွေ ထွက်လာတော့ ကျနော် လန့်ပြီး service center ကိုပို့လိုက် တာ
၁ လ လောက်ပဲ ခံ တယ် အသစ်လဲလိုက်ရတယ်
သူတို့ကို မေးကြည့်တယ် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကို
အဖြေကတော့ harddisk ကို တစ်ခုခုနဲ့ ထိခိုက်မိလို့ ဖြစ်သွားတာပါတဲ့
တစ်ခါတစ်လေ harddisk ပျက်ခါနီးဆိုရင်လည်း အသံထွက် တက်ပါတယ် တဲ့
ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိဘူး..... ပိုက်ပိုက်တော့ ထွက် သွားတယ်
6 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 12:59 pm
Safe mode နဲ့ ဝင်ပြီး CHKDSK C: /F /R လုပ်ခိုင်းပါသတဲ့
The /R option tells CHKDSK to scan for bad disk sectors, and the /F option means to fix any errors found.
မှတ်မထားမိတော့ မေ့သွားလို့ ...
7 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 1:02 pm
ဟုတ်ပါတယ်.... Harddisk ထဲမှာ ရှိတဲ့ Hard နဲ့ Disk တိုက်နေရင်လည်းဒီလိုအသံတွေထွက်တတ်ပါတယ်.... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ HDD က၀ယ်တာနှစ်ပါတ်ပဲရှိပါသေးတယ်....ကောာင်းရော....
8 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 25th April 2010, 1:05 pm
warranty ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] ..... ဒါပေမဲ့ ကို solakoko ပြောသလို တစ်ချက်လောက် စမ်းကြည့်လိုက် ပါဦး..... ပြန်မကောင်းရင်တောင် ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ သိချင်သိမှာပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 6th May 2010, 9:11 pm
HDD ကအသံထွက်တာကတော့ windows နဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။
ပြီးတော့ power ကြိုးတစ်ချောင်းထဲမှာ နှစ်ခုသုံးလည်း ထွက်တဲ့ volt ကအတူတူပါပဲ
အသံထွက်တာကတော့ HDD အထဲမှာ sector တွေကို Read လုပ်တဲ့ ခေါင်းလေးနဲ့ ငြိငြိသွားလို့ပါ
warranty ကျန်သေးရင် ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးသွားပြန်ပြတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 7th June 2010, 2:07 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ကျွန်တော်က လည်း ကို cornet ပြော သလိုဘဲလို. ထင်ပါတယ် တခါမှမကြားဖူးဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 7th June 2010, 3:36 pm
ကိုဘီလူးရေ .. ကျွန်တော် ကတော့ ဆိုင်ကိုပဲ မြန်မြန်သာသွားလဲ ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ....
12 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 30th November 2010, 2:35 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-11-16
13 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 30th December 2010, 5:50 pm
HDD ကပျက်ခါနီးရင် အသံထွက်ပါတယ်။ ဘယ်ကထွက်လာတာလဲတော့မသိဘူး။
14 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 1st January 2011, 10:27 pm
အင်ကျွန်တော့ hdd လဲ ဖွင့်စဆို အသံ မည်နေတယ် .. ၀င်းဒိုးတက်ရင် ပြန်ပြောက်သွားတယ် .. အဲ ဒါရော ဘာဖြစ်တာလဲ ခင်ဗျ..
15 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 2nd January 2011, 2:31 pm
အသံမြည်တာကတော့ HDD ထဲက Platter နဲ့ Slider(and Head) လေးနဲ့ညိညိပြီး
မြည်သံထွက်လာတာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကလဲ အဟောင်းဖြစ်ဖြစ် အသစ်သစ်ဖြစ်
ဖြစ်မြည်တတ်ပါတယ်။ အဟောင်းတွေက တော့ HDD ကိုသုံးစွဲနေရာကနေ ကြာလာ
ရင် သူ့ရဲ့ Motor Drive တွေ လည်ပတ်နှုန်းအားကျလာတာ၊ မမှန်တော့တာ၊ Actuator
Arm လို့ခေါ်တဲ့မောင်းတံအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနိမ့်လာတာတွေအပြင် Platter ပြား
တွေ ရေပြင်ညီမှုမရှိတော့တာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကလဲ Motorပါတဲ့
Electronic ပစ္စည်းတိုင်း အနည်းနဲ့အများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အသစ်မှာတော့ HDD လွတ်ကျတာ၊ ဆောင့်မိတာ၊ အရမ်းလှုပ်မိတာတွေကြောင့်ဖြစ်
တတ်ပါတယ်။ အဲ.....အသစ်ရော၊ အဟောင်းပါဖြစ်တတ်တာနောက်တစ်မျိုးကတော့
HDD ရဲ့ Qualityပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းတာ, Power ကျော်သွားတာ(Power Supply
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ HDD ကခံနိုင်ရည်အားနည်းသွား
ပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အသစ်လဲလိုက်ပါလို့အကြံပေးပါရစေ။ HDD ကို Scan Disk လုပ်
ခိုင်းရင်လဲ ကောင်းနိုင်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အသစ်လဲပြီးသုံးပါလို့ပဲ ထပ်အကြံပြုပါရစေ။
Data တွေသွင်းထားပြီးတဲ့အချိန်ရောက်မှ HDD ပျက်သွားခဲ့ရင်တော့ အစားထိုးမရနိုင်
အောက်ကပုံလေးကတော့ HDD ရဲ့လည်နှုန်းလေးကို မြင်သာအောင်ပြထားတဲ့ပုံလေးပါ။
ဖတ်မိတဲ့သူများလဲ မှားနေတာများရှိရင်၊ လိုအပ်နေတာများရှိရင် ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ဖြည့်ှစွက်
16 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 2nd January 2011, 4:35 pm
ဘီလူး wrote: ကျွန်တော့်အထင်တော့...... Power မလုံလောက်လို့ လားမသိဘူး..... ကျွန်တော်က Power ကို
တစ်ကြိုးထဲမှာ ထိုးထားလို့ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ Power Supply တွေမှာ အဲ့လိုမျိုးဆက်ထားတယ်ဆိုတာ Parallel အနေနဲ့ဆက်ထားတာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် Parallel ဆိုရင် Voltage တူတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း HDD ရော DVD writer ကော power အတူတူရမှာပါ။
17 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem] on 7th January 2011, 1:31 pm
ကိုအသဲကွဲလူသား ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ HDD ကိုအသစ်လဲ သုံးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ တော်ကြာ data တွေ ထည့်လိုက်ပြီးမှ HDD ပျက်သွားရင် data တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
18 Re: ဒါမျိုးကတစ်ကယ်လား [Problem]